Thelekisa izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zeendlela eziphambili zokuqhubekeka kwezinto ezibonakalayo zeplastiki
Ukuthelekiswa kokulungileyo kunye nokungalunganga kweendlela ezininzi zokulungisa izinto zeplastikhi zokwenza izinto ngenaliti yokubumba Umgaqo wenaliti yokubumba kukongeza izinto eziyimbumba okanye umgubo kwi-hopper yomatshini wenaliti. Izinto eziphathekayo zifudunyezwa kwaye ziyanyibilika kwaye ziyasebenza. Unde ...
Ulondolozo lwemihla ngemihla kunye nolondolozo lomatshini wokubumba
1. Inkqubo yeplastikhi Ibhokisi yegiya kufuneka itshintshe ioyile rhoqo. Khetha i-150 (okanye i-220) yeoyile yoxinzelelo oluphakathi. Guqula ioyile emva kweeyure ezingama-500 usetyenzisile kumatshini omtsha, emva koko utshintshe ioyile rhoqo emva kweeyure ezingama-3000. Xa umatshini eyeka nje ukusebenza kwaye i-gearbox isese ...
Inkqubo Ukubumbela Intshayelelo
Inkqubo yokwazisa i-3/4 yeemveliso ezibunjiweyo zenziwe nge-extrusion yokubumba. Inkqubo ye-extrusion kukunyanzela umbandela ngomngxunya okanye ukufa ukuze wenze imveliso. Inkqubo yokubumba yokuqhuma inamanyathelo ama-5: 1. I-preform yeplastikhi (i-extrusion yetyhubhu yeplastiki engenanto). ...